Dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka Hortimid Qorshe ay Waddo Xukuumadda Soomaaliya – Radio Daljir
Juunyo 24, 2017 10:05 b 0
Waxaa 21/06/2016 shir sodcday mudo labo bari ah ugu soo gaba gabagaboobay caasimada Puntland ee Garowe Dallada Ururada Dhalinyarada Puntland (PYAN) kaasoo looga arin sanayay sidii loogu qareemi lahaa waxna loogu biirin lahaa hansami u socodka arimaha dhalinyarada ee guud ahaan Soomaliya waxaana kasoo baxay qodobada soo socda.
In Dalladu ay garab taagantahay soona dhawaynayso hawlaha horumarineed ee kasocda guud ahaan
Dalladu waxay u soo jeedinaysaa in dhalinyaradu usoo jeedsato horumarinta
Dalladu waxay ayada oo aad uga xun cadaynaysaa in aysan qayb ka ahayn waxna kala socon siyaasadda dhalinyaradda Qaranka Soomaliyeed, oo 05/06/2017 shir lagu qabtay caasimada dalka ee Muqdisho, looguna magacdacdaray ansixinta siyaasadda dhalinyaradda Qaranka Soomaliyeed lagu soo bandhigay. Wasaaradda Dhaliyada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyada Federal Soomaaliya waxay dad kooban ka casuuntay wasaaradda dhalinyaradda ee heer maamul goboleed ayadoo aan horay looga samayn wax wada tashi ah oo lala sameeyo dhalinta laguna baahin qaybaha kala duwan ee wadanka anagana ay noogu horaysay furitaankii shirka. Siyaasadda dhalinyaradu maaha wax asbuucyo lagu samaykaro ayna samaynkaraan shiqsiyaad kooban, waa wax u baahan in sifiican looga baaran dago lagana qayb galiyo dhalinta heer gobol, heer dagmo ilaa heer tuulo, sidaa darteed waxaan cadaynaynaa in aysan waxba naga khusayn siyaasadaa hadaan hanaanka loo wado wax laga badalin aysana ahayn mid ka turjumaysa rabitaanka iyo baahida guud ahaan dhalinta
May 2016 waxaa shir ka dhacay magaalada Kismaanyo lagu asaasay dallad kumeel gaar ah oo ay ku midaysan yihiin guud ahaan dalladaha dhalinyarada heer maamul Goboleeed loona doortay Fadumo Abdi Warsame (Fadumo Qaran) uuna xiligeedu ku eg yahay Aug, 2017. Waxaan wasiiradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Mamo Khadiijo Mohamed Diriye isku afgaranay dhamaadkii March,2017 in doorashada la qabto xiligii loogu talagalay ayna doortaan gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada Qaranka Soomaaliyeed xubno si siman looga soo xulay dalladaha guud ee heer maamul goboleed ayna goobjoog ka ahaadan wasaraddaha dhalinyarada iyo ciyaaraha heer maamul goboleed, doorashaduna u dhacdo si daah furan loona aqoonsanayahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Qaranka Soomaliyeed qofkii halkaa lagu doorto aysana jirin cidkale oo sheegan Nasiib daro waxaa nagu maqaalaa in wasiiradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Mamo Khadiijo ay wado qorsha ah in ay ayadu magacawdo gudoomiyaha dhalinyarada Soomaliya, waxaa cadaynaynaa in aysan ahayn arintaasi mid waafaqsan nidaamka Federal ka, qofka lamagacaabana uusan noqonayn mid matala dhalinta ee uu noqonayo waax wasaaradda kamid ah. Waxaan leenahay dhalintu afduub waaka gudubtay waana waajib in ay cida matalaysa ay ayagu go’aan sadaan.
Ugu danbayn waxaan wasaaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Somaliya iyo guud ahaan masuuliinta qaranka u soo jeedinaynaa in dhalinta loo tixgaliyo rabitaan kooda lana siiyo mudnaanta ay leeyihiin. Waa nasiib daro lamana aqbali karo in maanta oo dhalintii Soomaliyeed la il darantahay masiibooyin baahsan intii wadankooda u soo jeedayna loo diido in ay samaystaan madal ay isugu yimaadaan ugana qayb qaataan midnimada, horumarka iyo dib u dhiska